Waa maxay Pfandkredit? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks Pfandkredit
1 Maxay tahay deyn amaah guri?
2 Faa'iidooyinka hanti
2.1 Sidee ayaad u heshaa deyn?
2.2 Qiimaha kharashka
2.3 Yaa loogu taliyey inuu tago Pfandlei?
3 Xidhiidhada la xiriira:
Maxay tahay deyn amaah guri?
ALS Pfandkredit waa deyn yar, oo aad ka hesho Pfandhäusern si aad u heshid amniga. Si aad u hesho deyn ballan ah, waa inaad ku shubtaa qiimo qiimo leh pawnbroker. Qadarka lacagta amaah Pawnbroker waxay xisaabisaa qiimaha deynka ee deebaajiga. Xaaladaha intooda badan, saacadaha dhagaxyada qaaliga ah, dheemanka, birta qaaliga ah, dahabka, moobilada, kombiyuutarada kiniiniga iyo waliba qalabka tayada sare leh ee qaybta qalabka elektarooniga ah ayaa la amaahiyaa. Ka dib markaad bixisay wadarta qaddarka la isku raacay, pawnbroker ayaa soo celin doona qiimahaaga. Qaddarka la isku raacay wuxuu ka kooban yahay kharashka raasumaalka, dulsaar iyo wadarta daynta.
Qodobbada loogu talogalay biilasha ayaa khasab ku ah xildhibaannada. Taasi waa sababta aad u joogtid dhinaca ammaanka ee macaamilka marka aad ka faa'iideysaneyso gawaarida. Faa'iidooyinka kale ee dammaanadda:
amniga sare ee deebaajiga (caymiska muddada kaydinta)
dhaqso, lacag aan loo baahneyn oo lacag ah
qiimeyn sax ah oo degdeg ah oo ay sameeyaan khubaro khibrad leh
no jeeg credit
Sidee ayaad u heshaa deyn?
Pfandkredit waxaa lagu gartaa shaqeyn aan habooneyn. Uma baahnid inaad bixiso wax caddayn ah awoodda aad u leedahay inaad bixiso ama caddaynta mushaarka la leh pawnbroker. Si loo dhamaystiro qandaraaska leh roodhida, waa ku filan inaad soo gudbiso kaarkaaga aqoonsiga. Badanaa, qandaraaska amaahda waxaa lagu soo gabagabeynayaa mudo ah saddex bilood. Haddii aad xanuunsato inta lagu jiro mudada, pavnshop waxay ku siineysaa mudo sugitaan afar todobaad ah.
Si aad u hesho Pfandkredit, dukumeenti aqoonsi (baasaboor ama kaarka aqoonsiga) iyo qiimaha aad rabto inaad amaahdo, pawnbroker. Garsooruhu wuxuu qiimeeyaa deebaajiga wuxuuna go'aamiyaa qiimaha sheyga. Sida caadiga ah, 50 boqolkiiba qiimaha dib u soo celinta ee deebaajigaaga waxaa lagugu siin doonaa deyn ahaan. Haddii aad ogolaato shuruudaha, heshiis damaanad ayaa la soo saari doonaa oo saxiixayaa. Kadib markii uu dhamaado muddada lagu heshiiyey, waxaa laguu soo celin doonaa bixinta lacagta kharashka.
Sida hore loogu soo sheegay, waxaa lagugu siin doonaa qaddar deyn ah oo ah boqolkiiba 50 ee pawnbroker ee qiimaha iibka. Mudada dheer ee qaangaarka ah iyo kan sare ee deynta, qiimaha qaali waa qaali. Celcelis ahaan, qiimaha deyntu waa inta u dhexeysa hal iyo laba boqolkiiba lacagta lagugu siiyay bil kasta. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagugu soo dallacayaa caymiska iyo kaydinta alaabadaada qiimaha iyo qiyaasta qiyaasta qaanuunka.
Tusaalahan soo socdaa waxay muujinaysaa: Ilaa dayn dhan deyn ah ee Euro 300 waa inaad bixisaa boqolkiiba 1 dulsaar + qiime joogta ah oo ah 6,50 Euro bishiiba. Bil kasta, waxaad bixin doontaa lacagtaada 9,50 Euro. Waxaad bixineysaa oo keliya qarashka wakhtiga sheyga dhab ahaantii ku yaal guriga lei. Waqtigaan waa la gaabin karaa marka la rabo. Iyadoo la kordhinayo waqtiga runtii waxaad ku bixineysaa kharash dheeraad ah maalintii. Haddii aad ka badan tahay xaddiga credit ee 300 Euro, xiiso ma ahan in la joojiyo, laakiin waa in aad ka wada xaajoodaan adiga. Sidaa darteed deyn laga soo qaado pawnshop ayaa sidaas noqon kara qaali.
Yaa loogu taliyey inuu tago Pfandlei?
Koorsada pawnbroker waa kuu habboon tahay, gaar ahaan haddii aad si dhaqso ah u soo ceshan karto hantidaada qiimaha leh. Si kastaba ha noqotee, haddii lacagtu dib u iibsato waa la waayay, waa inaad kordhisaa runtime. Tani waxay sababtaa kharash dheeraad ah.
Socdaalka pawnshop wuxuu noqon karaa ikhtiyaarka adiga haddii aad u baahan tahay lacag caddaan ah sida qof madaxbanaan, si aad si dhaqso ah u sameyso maalgashi.
Maqaalka xigtaCinwaankani waa magac